Nkpuchi na-echebe Kn95, nkpuchi nchebe N95, nkpuchi ọgwụ mkpofu - Felix
Kn95 bụ ihe nkpuchi ọkọlọtọ nke China. Onye na-ahụ maka iku ume Kn95 bụ ụdị akụkụ iku ume na arụmọrụ nhicha nke ọma na mba anyị. Ihe nkpuchi Kn95 na nkpuchi N95 bucha otu ihe n'usoro nke mkpocha ahihia.
A na-eji akwa mkpuchi nwere ike karịa akwa atọ nke akwa 28g; Ihe imi ahụ mere na gburugburu ebe obibi niile plastik plastik, na-enweghị nchara ọ bụla, na-enwe ikuku ikuku (diskiable masks) nwere ike igbochi ọrịa akụkụ iku ume ruo n'ókè ụfọdụ, enweghịkwa ike igbochi haze.
E hiwere ụlọ ọrụ anyị na 2005, bụ ọkachamara R & D na-azụ ma na-ere akwụkwọ ndetu, ndetu Sticky, folda Njikwa, aka Sanitizer, PU akpụkpọ anụ, PPE ihe wdg. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Anyị dị na Shenzhen obodo nwere ohere njem dị mma. Ruo taa, anyị nwere ndị ọrụ karịrị narị mmadụ atọ na iri afọ nke ahụmịhe ahia mba ofesi, a na-ebuga ngwaahịa anyị na Europe, South America, Australia, Africa na Asia.
Na agbanyeghị ụdị ngwaahịa a, anyị ga-ebido site na azụta akụrụngwa, ruo na mmepụta ngwaahịa, ruo na mbupu na mbupu, na mbupụ ma na-apụ n'ọdụ ụgbọ mmiri, ndị ọkachamara na-achịkwa nzọ ụkwụ nke ọ bụla, iji hụ na ngwongwo ahụ dị mma ma rute ndị ahịa n’oge.
Ihe omuma banyere oria puru iche ndi mmadu enweela ma obu gabia oru, na ntiwapu nke ugbua kwesiri ime? 1. Etu ị ga - eyi akwa ịwa ahụ ị na - emefu n'okporo ụzọ na - arụ ọrụ. Gbalịa ka ị ghara iji ụgbọ njem ọha, a na - atụ aro ka ị jee ije, igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ buru ụgbọ ala nke onwe, ụgbọ ala na - arụ ọrụ.Ọ bụrụ na ị ...
Iji merie mgbochi ọrịa na njikwa ọrịa a, isi ihe bụ "mgbochi"
Iji merie mgbochi ọrịa na njikwa ọrịa a, isi ihe bụ “mgbochi”. Ndi otu WHO ekwuola na oria ojoo akpukpo coronavirus di “oria ojoo a”. Obere masks adọtala ọtụtụ ijeri mmadụ n'ụwa niile. Akpata obere nkpuchi bụ agbụ nke mmepụta na n'ichepụta ihe na m ...
China mma mkpu mkpuchi mmịfe na-eweta